Wooden Whirlpool | BadeBOTTI.CH – asalka Swiss tan 2004
Classic oo ka taataabtay – soo diray ku lamaan technology
Farxada qubeyska iyo fududaato isticmaalka a tubbo biyo kulul oo casri ah waxa lagu lamaaneeyey qoryihii wax soo saarka dabiiciga ah.
Technology waxaa si xirfad leh u qarsoon oo aad nasato karaa weyn ee dibadda …
The tubbada kulul Wooden waxaa laga heli karaa in tirada 152, 182 und 214cm Durchmesser erhältlich und bietet Platz für 4-8 Dadka.
Waxaan u isticmaali qaybaha qulaya tayada Balboa xakamaynta, Kululaynta Electric, Duugista-Jet Pumpe, Ozonator und Filtersystem.
Qabo tilmaamaha mouse ku dhibcood ku habboon si ay u arkaan Tilmaanta.
(4,834 Dadka arki this post)
8 thoughts on “Wooden Whirlpool”
Wir sind an Ihren Produkten sehr interessiert, Hot Tube Saunafass sowie.
Waxaad fadlan noo soo diri karaa liiska qiimaha? Ka dib Waxaan jeclaan lahaa in aad la xiriirto si ay ugala hadlaan faahfaahin dheeraad ah. Mahad badan oo
Waxaan leenahay badan oo kala duwan oo foosto qubeyska iyo qolalka uumiga beerta. Waxaad abuuri kartaa jeelkaas wacnaan shakhsiyeed sida aad adigu jeceshahay.
The documents sida warbixin hordhac ah waxaan idiin soo diray e-mail.
Waxaa wanaagsan inaad na soo wac, Noocan oo kale ah 052 347 3727 ama na siiso lambarka telefoonka aad u callback ah oo loo yaqaan. Aad ayaad u mahadsantahay.
Daryeeli doontaa saabsan wirlpoolfass ah, waxaad noo soo diri kartaa liiska qiimaha a?
Tubbo biyo kulul la design qulaya waxay leedahay fursado badan. Sidaas darteed waxaad ka dhigi kartaa doorashada isu tubbo biyo aad u kulul wada.
The documents sida warbixin hordhac ah waxaan idiin soo diray e-mail. Waxaa wanaagsan inaad na soo wac, Noocan oo kale ah 052 347 3727 ama na siiso lambarka telefoonka aad u callback ah oo loo yaqaan.